UPhumlani ‘Big Pun’ Dube, umsakazi wakudala weVuma FM, iGagasi FM, uKhozi FM ne-East Coast, i-community relations officer yaMaZulu FC, i-fitness trainer nenxusa leMcCarthy VW Durban - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Noma ngingakhumbuli kahle kodwa ngicabanga ukuthi ngangineminyaka ewu-23, kodwa ngiyakhumbula ukuthi i-akhawunti yokuqala ngayivula eNBS.
Ngafunda ukuthi kubalulekile ukonga imali nokugwema izikweletu.
Ngaqala ukusebenza ngokugcwele ngo-2002. Ngicabanga ukuthi ngangihola ngaphezudlwana kukaR6 000.
Ngathenga izingubo zokugqoka, ngasiza nasekhaya.
Ngalungisa (ekhaya), ngakhokhela nabazali bami izikweletu.
Wukuthenga izinto engingazidingi.
Wukuthi imali iyongiwa, nokuthi kuhle ukuphila impilo engangamandla akho.
Ngingathenga impahla yokwakha, ngakhe.
Ungabeluleka uthini abanye abakwezokuxhumana ngokuphatha imali?
Ungazifaki ngaphansi kwengcindezi yokujabulisa wonke umuntu. Yenza izinto ngendlela okholwa ngayo. Ungenzeli abantu futhi ungavumi ukuba yinto ehamba nomoya, evumela yonke into eshiwo ngabantu. Ungayibhubhudli imali sengathi uyayiqabuka.